Monetizer: Monetize gị foduru, Geo-redirect ma ọ bụ itzọ ọpụpụ | Martech Zone
Thursday, August 25, 2016 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, onye ọ bụla bịara na saịtị gị ọ bụghị atụmanya. Y’oburu n’itugharia na saiti gi na ihe ndi ozo, ihe mgbasa ozi ndi ahu choro ka ha gbanwee ma dikwa nma nye ndi nleta. Ọnụ ọgụgụ nke mmetụta na ọnọdụ dị na saịtị gị ka amaara dị ka mgbasa ozi gị Ndepụta Ngwaahịa.
Kedu ihe bụ okporo ụzọ fọdụrụnụ?
Ebe ọ bụ na ezubere mgbasa ozi na-ezubere iche, gịnị banyere hapụrụ ndị ọbịa na-adịghị ezubere iche? A maara okporo ụzọ ahụ dị ka okporo ụzọ fọdụrụ. Trafficzọ ndị fọdụrụnụ bụ nsogbu maka ndị na-ebipụta akwụkwọ n'ịntanetị n'ihi na ọ bụ okporo ụzọ na ha enweghị ike ịkpata ego.
N’ahịa mgbasa ozi n'ịntanetị nke oge a, ọtụtụ ndị mbipụta akwụkwọ, ndị mgbasa ozi, na netwọọdụ mgbasa ozi anaghị eji usoro ekwentị na weebụ ha arụ ọrụ kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, ndị ọbịa sitere na mba ndị ezubere iche nwere ike ịga kpamkpam na ohere iji kpata okporo ụzọ na-ahapụ ibe mgbasa ozi anaghị adịkarị.
Dika o nwere ike isiri gi ike ikpuchi akuku obula ma lebara uzo obula anya mgbe ichoro inweta ego ezubere iche, wepu, ma obu ndi ozo, Monetizer bu ihe omuma nke oma.
Onye na -akpata ego na-enyere ndị nkwusa aka iwepụta akwụkwọ mgbasa ozi pụrụ iche, nke kachasị nke ọma iji nweta ego ị ga-enweta n'okporo ụzọ n'ihe karịrị mba 150. Usoro eji otu Njikọ Smart Global. Ha proprietary igwe mmụta vAuto algọridim na-eleba anya na ọnọdụ ndị ọbịa, sistemụ arụmọrụ, na onye na - ebu ya - yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ - iji mepụta eCPCs pụrụ iche (ntinye ọnụ-kwa-elu) maka ndị mmekọ anyị.
Ihe ikpo okwu anyị na-aga n'ihu na-amịpụta nsonaazụ pụrụ iche, yana ọtụtụ ndị mmekọ na-emepụta ọtụtụ puku dollar na-enweta ego kwa ụbọchị site na okporo ụzọ ndị nwere ike ịbụ na ọ ga-abụrịrị na-enweghị isi. Ka anyị na-elekwasị anya na teknụzụ dị n'azụ ikpo okwu, njikarịcha nke mkpọsa, na mmekọrịta ọhụrụ na ndị mgbasa ozi, anyị nwere obi ụtọ ịhụ ihe ọdịnihu Monetizer na ndị mmekọ anyị! Max Tetrault, Onye Mmekọ, Onye na -akpata ego
Onye na -akpata ego na - enweta ego ~ nde 120 clicks / ụbọchị na ~ 3 ijeri clicks / ọnwa site na mba 150 +. Ha na-enwe ike monetize ma mobile na web (ma isi na ndị okenye okporo ụzọ). Ha Global Smart Link na-agbanwe agbanwe, gụnyere nhọrọ SEO-friendly. Ntinye aka na Monetizer na enye otutu oge na akuko, na ugwo n’izu nke eweputara ego nye ndi ozo.
Akpata oyi wụrụ m mgbe mbụ anyị malitere Monetizer. Teknụzụ dị ịtụnanya, ebe ọ na-echekwa ego anyị na-agba mgba n'oge gara aga. Bert Xia, onye njikwa azụmaahịa, Ee, Obi
Banye maka Monetizer
Ngọnarị: Monetizer na-eme mkpọsa mgbasa ozi na saịtị anyị ugbu a (nke ahụ bụ etu m si chọpụta ha!)
Tags: ngwa ahiangwaahịa mgbasa ozinke ọmaecccenwekwu ego-kwa-pịaMax tetraultmonetizerokporo ụzọ fọdụrụGịnị bụ ihe fọdụrụ okporo ụzọeemobi
Aug 26, 2016 na 6: 07 AM
nnukwu edemede banyere otu esi elekwasị anya na okporo ụzọ fọdụrụ !! ga nwaa ya !!